Shirka wadatashiga mashruuca ka soo kabashada xasaradaha Soomaaliya oo ka furmay Muqdisho (Sawirro) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Shirka wadatashiga mashruuca ka soo kabashada xasaradaha Soomaaliya oo ka furmay Muqdisho (Sawirro)
Shirkaan wadatshiga oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaraddaha qorsheynta Qaranka iyo maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xoogga lagu saarayo sidii wax looga qaban lahaa abaaraha, fatahaadaha, ayaxa iyo cudurka covid-19, ayaa waxaa dowladda Soomaaliya ka taageeraya bankiga adduunka.
Cali Xaaji Aadan maareeyaha mashruuca ka soo kabashada xasaradaha Soomaaliya ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in mashrucuan ahmiyadd weyn u leeyahay bulshada nugal ee uu saameeyeen daadadka, abaaraha iyo ayaxa.
“ mashruucan waxa garwadeen ka ah dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan, wasaaradaha qorsheynta iyo maaliyadda isla markaana waxaa naga taageeraayo banka aduunka, waxa uu xoogga saarayaa afar qeyb oo mudnaanta u leh maamulka Hirshabeele si wax looga qabto, fatahada, Abaaraha, ayaxa iyo covid- 19 oo dhibaata weyn bulshada nugal ee u baahan in wax lala qabto, waa mahadsan yahiin madaxda maanta halkan nala joogta ee si aan isla fiirno muhiimada dhaxal reebka ah ee wax laga qaban karo.” ayuu yari cali xaaji aadan.
Asad yuusuf Qanyare oo ah madaxa xiriiraha qaran ee deeqa caalamiga ah ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ayaa sheegay inuu shirka ujeedkiisu uu yahay sidii looga hortegi lahaa xasaradaha soo noq noqday ee abaaraha, dadaadka, ayaxa iyo cudurka covid-19.
“ waxaan ku faraxsanahay in wasaaradaha ay quseeso arrintaan inay goob-joog ka yahiin wadatashigaan, waxaan isla eegaynaa mudnaansiinta baahiyaha hortabinta u leh maamulka Hirshabeele ee ka soo kabashada u adkeysiga xasaradaha maamulka” ayuu yari asad yusuf.
diyaarinta mashruucan waxaa lagala tashaday wasaaradaha ay quseeyso heer fedaraal iyo heer dawlad goboleed.
wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta heer federaal waxa ay in muddo ah ka shaqeeynayeen qaabdhismeedka lagu hirgelinayo mashruuca iyo shaqaaleynsiinta howl-wadeenada mashruucan;
waxaa jiray shuruudo adag oo uu bankiga aduunku ku xiran maalgelinta mashruucan oo ay lagama maarmaan tahay in lafuliyo si loo soo daayo lacagaha. waxaa ka mid ah diyaarinta dokumeentiga mashruuca, sharciga, heshiiska maalgelinta iyo diyaarinta howlwadeenada laf dhabarka u ah mashruuca.
Shirka wadatashiga mashruuca ka soo kabashada xasaradaha Soomaaliya oo ka furmay Muqdisho (Sawirro) was last modified: October 21st, 2020 by Admin